30 Cowboy Bebop Quotes Hitondrana anao hiverina amin'ny taona 90 - Hafa
30 amin'ireo teny niavaka indrindra avy amin'ny Cowboy Bebop izay hamerina anao amin'ny taona 90
Loharano misy sary: Wallpaper UP
Cowboy Bebop dia anime natsangana tamin'ny taona 2071, izay mahatsikaiky satria ity kilasin'ny sekoly taloha ity dia mialoha ny fotoany.
Ny adventures habakabaka tsy manam-paharoa sy ny lohahevitra tsy manam-paharoa dia hahatonga anao hieritreritra amin'ny ambaratonga lalina, ary hisokatra amin'ny sainao ho amin'ny fomba fijery vaovao toy ny tsy misy anime hafa amin'ny fotoany.
Ireto ny sasany amin'ny teny nindramina SOA Cowboy Bebop tsy maintsy manolotra.
Teny notsongaina tsy hay hadinoina indrindra nataon'i Cowboy Bebop:
'Hoy ianao tamiko indray mandeha mba hanadino ny lasa, satria tsy maninona izany, fa ianao no mbola mifatotra amin'ny lasa, Spike.' - Faye Valentine
'Tsy afaka miraikitra amin'ny toerana iray mandritra ny fotoana maharitra aho - hamono ahy io. Toy izany ny fianakaviako iray manontolo. ' - Faye Valentine
“Fantatrao ny fitsipika voalohany amin'ny ady? tifiro alohan'ny hitifirany anao. ” - Faye Valentine
“Ny lasa dia lasa ary ny ho avy dia ny ho avy. Ny lehilahy dia lehilahy ary ny vehivavy iray vehivavy. Ny ankehitriny dia izao. Izaho dia iza aho ary ianao dia iza ianao. Izay ihany no misy. Tena maninona ve? Sa isika mihevitra fa marina izany? ” - Faye Valentine
“Ny fahaveloman'ny mahery indrindra dia ny lalànan'ny natiora. Mamitaka isika na voafitaka. Miroborobo na maty àry isika. Tsy nisy zavatra tsara nitranga tamiko rehefa natoky ny hafa aho. Izany no lesona. ” - Faye Valentine
'Matetika izy ireo milaza fa tsy afaka miaina irery ny olombelona. Saingy afaka miaina maharitra ela ianao. Raha tokony hahatsapa ho irery ao anaty vondrona ianao dia tsara kokoa ny mitokana irery. ' - Faye Valentine
# 2 - Teny notsongaina tany London
“Ny fanahy nomen'Andriamanitra antsika, ny fanahintsika. Ny fanahintsika, izay nahita fomba nilomano tamin'ny tambajotra goavambe sy miaina ao anatin'ny tsy manam-petra habakabaka. Tsy vatan'olombelona fotsiny ve ny vatan'olombelona? Karazana fisiana kely sy malemy loatra noho ny fahatsiarovan-tena miaraka amin'ny tratrany sy ny mety ho vitany. ” - Londes
# 3 - Teny notsongain'i Vincent Volaju
“Tsy matahotra ny ho faty aho. Midika fotsiny izany hoe manonofy ao anaty fahanginana. Nofinofy maharitra mandrakizay. ” - Vincent Volaju
“Nandritra ny andro niainako dia ireo niara-nandany taminareo ihany no toa tena misy.” - Vincent Volaju
“Tsy misy olona afaka manisy tsipika mazava eo anelanelan'ny salama saina sy ny adala. Afindrao io tsipika io araka ny hitanao fa mety ho anao. Tsy misy olon-kafa afaka. Ho takatrao tsy ho ela… fa ny adala dia izao tontolo izao. ' - Vincent Volaju
“Fantatrao betsaka ny momba ny afofandiovana? Io no toerana eo anelanelan'ny lanitra sy ny helo, izay mbola nijaly hatrany ireo tavela, tsy afaka niditra tany an-danitra, toerana misy tolona sy fanaintainana. Izany hoe izao tontolo izao izay misy antsika ankehitriny. ” - Vincent Volaju
# 4 - Jet Black Quote
'Toy ny nolazain'i Charlie tao amin'ny nofiko ihany io. Raha te handray ianao dia mila manome. Jereo ny Spike, mila mihaino ny nofinao ianao, izany no ahitanao ny zazavavy nofinofisinao. ' - Jet Black
“Ny olombelona dia natao hiasa sy hatsembohana noho ny volany rahateo. Ireo izay manandrana manankarena haingana na mivelona amin'ny volan'ny hafa - mahazo valifaty avy any an-dàlana daholo. Izany no lesona. Fa ny iray amin'ny olombelona dia ny manadino haingana ny lesona nianarany izy. ” - Jet Black
“Toa mieritreritra ny lasa taloha foana ny lehilahy alohan'ny hahafatesany, toy ny hoe mitady tsy misy porofo izy ireo hoe tena velona.” - Jet Black
'Teo foana ho ahy ianao, ary izay ihany no nilaiko. Ianao ihany. Noho ny antony sasany dia tsy nahatsiaro nalahelo aho na nisaraka, toa tsy tena izy ilay izy. Saingy tsapako tsikelikely fa tena izy - lasa ianao. Ary tsikelikely dia tsapako ho lasa tsy misy dikany ny ao anatiko. ” - Jet Black
“Misy fiandohana sy fiafarana ny zavatra rehetra. Ny fiainana dia tsingerina fanombohana sy fijanonana fotsiny. Misy faran'ny tsy irintsika, saingy tsy azo ihodivirana izy ireo. Tsy maintsy miatrika azy ireo isika. Io no maha-olombelona. ' - Jet Black
“Fony aho nihaona voalohany dia nisy zavatra nolazainao tamiko. Nilaza ianao fa maty indray mandeha, nahita faty. Fa maninona no tsy avelanao handeha fotsiny? Hadinoy ny lasa. ” - Jet Black
“Jereo ny masoko, Faye. Ny iray amin'izy ireo dia sandoka satria very aho tamin'ny lozam-pifamoivoizana. Hatramin'izay dia hitako tamin'ny maso iray ny lasa ary ny iray ankehitriny. Ka noho izany dia nieritreritra aho fa tsy hahita afa-tsy ny fitrangan'ny zava-misy fa tsy ilay sary manontolo. Nahatsapa aho fa nijery nofy tsy afaka nifohazako mihitsy. Talohan'ny nahalalako azy dia tapitra ny nofy. ” - Spiegel Spike
'Mbola tanora aho tamin'izay, tsy natahotra na inona na inona aho, tsy nieritreritra ny ho faty segondra aho. Nihevitra aho fa tsy ho resy. Avy eo nifanena tamina tovovavy vitsivitsy aho. Te ho velona aho, nanomboka nieritreritra toy izany; sambany aho natahotra ny ho faty. Tsy mbola nahatsapa toy izany aho taloha. ” - Spiegel Spike
“Anjely nianjera noroahina avy tany an-danitra, nitsangana nankeo amin'ny mazava mba horaisin'ny fahasoavan'Andriamanitra.” - Cowboy Bebop
'Tiako ny karazana vehivavy afaka mandaka ny borikiko.' - Spiegel Spike
“Nisy saka nahatsiravina tigra indray mandeha. Ity saka ity dia maty maty an-tapitrisany, velona indray ary niaina fiainana an-tapitrisany. Ary manana tompona isan-karazany izy izay tsy dia niraharaha azy loatra, ny saka tsy natahotra ny ho faty. Avy eo indray andro dia nifanena tamina saka vavy fotsy izy roa, nifankatia izy roa ary niara-niaina tamim-pifaliana. Nandeha ny taona ary antitra ary maty ilay saka vavy fotsy. Ny saka Tiger Striped dia nitomany in-tapitrisa, avy eo maty koa izy. Fa tamin'ity indray mitoraka ity… ..tsy niverina izy. ' - Spiegel Spike
“Misy zavatra telo halako indrindra: Ankizy, biby fiompy ary vehivavy manana fihetsika. Koa lazao amiko, fa maninona izy rehetra no tafiditra ao anaty sambontsika? ” - Spiegel Spike
'Tsy te hiaraka sy handany ny fiainanao miaraka aminay ve ianao?' - Spiegel Spike
'Tsy ho faty aho. Handeha hamantatra aho raha tena velona. ' - Spiegel Spike
silaka hatsikana mahatsikaiky indrindra amin'ny fiainana an-tsary
# 6 - Tenim-bolo mihomehy
“Aza matahotra ny Fahafatesana. Eo anilanay foana ny fahafatesana. Rehefa maneho tahotra isika dia mitsambikina haingana kokoa noho ny hazavana izy io. Nefa, raha tsy mampiseho tahotra isika, dia mijery antsika moramora izy avy eo ary mitarika antsika any amin'ny tsy manam-petra. ' - Bull mihomehy
# 7 - Teny ratsy
“Ny anjely noroahina avy tany an-danitra dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny ho tonga devoly.” - Masiaka
'Tsy misy sisa hino.' - Masiaka
# 8 - Andy avy amin'ny De Oniyate Quotes
'Maninona izahay no tsy misotro ho ahy sy ny taritro eo imasonao mahafinaritra?' - Andy Von De Oniyate
'Nilaza ianao fa tsy mila mpiara-miasa aminao, saingy miraikitra amin'izany teny izany aho… hatramin'ny ranomaso.' - Gren
Manana soso-kevitra momba ny famoahana lahatsoratra ho avy ve ianao? Zarao amin'ny fanehoan-kevitra.
Teny nalaina Anime 25 momba ny fitiavana sy ny fifandraisana
Ahoana ny fomba nivoaran'i Anime tamin'ny taon-dasa